Hadaladii Laga Yiri Aflagaadadii uu Wargeyska JP u Geystey Rasuulka (scw) - oo uu soo ururiyey Cabdisamad Xoday...
Haddaynu nahay dadka soomaaliyeed maxaynu ka qabannay arrintan? Maxaynu ugu hiillin karnaa Rasuulkeenna (scw)? Gabay, geeraar, maanso, masafo iyo wax kale, maxaynu awoodnaa?
Aaway abwaannadii mulaaqoon jirey markii reerkooda la soo qaado? Maxay uga aamuseen hiilka Nabiga (scw)? Maxaa dhici lahaa haddii maanta sawir-gacmeed lagu jaraaxeeyo mid ka mid ah awoowayaasha qabaa’ilka waaweyn ee Soomaalida, sida Reer Hebel ama Reer Hebel ama Reer Hebel?
Markii niman Soomaaliyeed dhaawaceen –sida la sheegay- sharafta gabadhii soomaaliyeed ee Samsam Axmed Ducaale, waxaa gabayo curiyey abwaanno aad u farabadan, taasi oo cidhiidh gelisey xukuumaddii booliskeeda loo tiiriyey falkaas xun.
Taasi waxay muujisay raadka abwaannadu ku leeyihiin jihaynta dhacdooyinka.
Runtii 100 waddo ayaad ku muujinkartaa gilgilashada damiirkaaga.
Waxaan u soo jeedinayaa qof walba oo Ilaahay ugu deeqay hal-abuur: gabay, geeraar, buraanbur, jiifto, masafo, heello iyo heesba in uu ka qayb qaato difaaca Rasuulka Sallallaahu caleyhi wasallam.
Waxaa runtii ceeb ah in aad awooddid difaaca qaddiyad qabiil oo aad ka gaabsatid difaaca Rasuulka Ilaahay (scw).
Arrintani ma ahan mid lala yaabi lahaa haddii ay dowladaha Yurub ka istaagi lahaayeen mowqif liddi ku ah, ama iska fogayn lahaayeen bilowgiiba. Mana lala yaabeen haddii aanay ku xidhnayn olole ballaadhan oo lagu sujuudinayo ummadda Islaamka, ama lagu jabinayo hankeeda.
Hadda ma doonayo inaan ka hadlo Ololahan ballaadhan, oo waxaa laga yaabaa in aan qoraal kale ku falanqeeyo.
Xaqiiqdu waxay tahay in Reer Galbeedku doonayaan in ay cabbiraan –miisaamaan- bal inuu noolyahay damiirka Ummaddu. Sidaas ayay ugu bilaabeen waxa ugu qaalisan ee Ummaddu leedahay: Quraanka iyo Nabiga (scw). Waxaa jirta maahmaah carbeed oo dhahaysa “taabashada badani dareenkay tagsiisaa”. Falsafad laga soo gaadhey Naziyiintii Jarmalka oo odhanaysa “ku celceli waa la rumaysanayaaye” ayaa ah mid ay Reer Galbeedku si weyn ugu dhaqmaan, gaar ahaan saxaafaddoodu. Haddii la arko in damiirka Muslimiintu weli noolyahay weerarka waa la hakin, haddii kalese waxaa loo sii dhaafayaa dhibaatooyin tan kasii waaweyn, haddayba jiraan.
Waxaad mooddaa in xilka Ummadda Islaamka ka saaran difaaca Rasuulku (scw) uu u kala badhanyahay labo qaybood, shacabka iyo dowladaha.
Dhinaca dowladaha, lagama yaabo in ay arrintan wax uga qabtaan sida ay mudantahay, iyadoo horay looga bartay hawl-gabnimo weynaatey.
Shucuubta muslimiinta ayaa –qayb ahaan- u hinqaday hiilka Rasuulka (sallallaahu caleyhi wasallam), in kasta oo aanay dhacdada le’ekayn. Cunaqabatayn iyo wacyi-gelin ballaadhan ayaa ka dhacday dalalka muslimka. Guddiyo ‘hiilka rasuulka’ ayaa la abuuray. Shirar iyo kulanno badan ayaa dhacay. Arrintiina weli way sii socotaa.
Adigana way ku sugaysaa!!!
Dalalka Yurub ayaa isku bahaystay olole ballaadhan oo lagu doonayo in lagu dulleeyo Islaamka iyo Nabigiisa (scw).
Joornaallo badan oo kasoo baxa meelo kala duwan oo Yurub ah ayaa iyagoo ku doodaya "xorriyadda hadalka", mar labaad 01/02/06 baahiyey sawir-gacmeedyadii ku xad-gudbayey Rasuulka Muxammed ah (sallallaahu caleyhi wasallam).
Faransiiska: Jariidadda lagu magacaabo France Soir oo ka soo baxda magaalada Paris ayaa iyadu soo celisey daabicista dhammaan 12-kii wawir ee xadgudubka, iyadoo weliba ku adkaysatay in aanay weligeed ka cudurdaaran doonin.
Boggeeda hore ayay ku qortay jariidaddani: "Haa! Waxaanu xaq u leennahay in aanu sawirno Ilaah" iyadoo markaasi ku hoos dhajisey mid ka mid ah sawirradii ay samaysay JyllandsPosten, Denmark.
Ninka iska leh joornaalkan oo ah nin Masri ah oo lagu magacaabo Raami Lakax, ayaa goor danbe cayriyey tafaftirihiisii isagoo taas ku muujinaya sida uu uga xunyahay daabicista sawirradaas.
Mulkiilaha Joornaalka ayaa sheegay in go'aanka uu ku casiley madaxii jariidda uu ku muujinayey "sida uu u ixtiraamayo mabaad'ida iyo afkaarta dadku ku qanacsanyihiin"
Jarmalkana: joornaal lagu magacaabo Die Welt ayaa ku soo buurtay isbahaysigan dhanka ka ah Nabi Muxammad (scw).
Jariidaddan oo iyadu baahisey 4 ka mid ah sawirradii lagu daabacay Denmark, oo ay mid ka mid ah ku dhajiyeen boggeeda hore ayaa ku tumatay karaamada muslimiinta, markay ku tilmaantay in ay iyagu -waa muslimiintee- yihiin kuwo munaafiqiin ah, ayna gardarro uga xanaaqeen sawirradan Denmark baahisey.
Waxay maqaalkeedii bogga hore ku tidhi: "Bannaanbaxyada iyo diidmada muslimiinta waa la qaadan lahaa hadday iyagu yihiin kuwo munaafaqad yar" iyadoo arrintaas daliil uga dhigatay "markii telefishanka Suuriya sii-deynayey filimmo sheekooyin ah iyo kuwo documentar ah oo u sawiraya wadaadada Yuhuudda inay yihiin dhiigyo cabyo, imaamyada muslimku way aamusnaayeen". Waxaa muuqata in aanay ilaa hadda Reer Galbeedku fahmin Qiimaha maqaamka Nabinimada, marba haddii lagu mataley xaakhaamyada Yuhuudda.
Talyaaniga: Jariidadda La Stampa ee Talyaaniga ayaa iyaduna daabacday sawirradan ku tacaddinaya Rasuulka (scw) shalay Arbacadii, meesha uu joornaalka kale ee isna ka soo baxa Talyaaniga, laguna magacaabo Corriera Della Sera, uu sawirradan baahiyey Isniintii tagtay.
Arrinta layaabka lihi waxay ahayd in xad-gudubka joornaalakani u geystey Nabiga (scw) uu la socdey qoraal uu qoray nin muslim ah (sheeganaya).
Qoraagan oo lagu magacaabo Majdi Callaam oo isagu qirtay in sawirradani yihiin kuwo xasarad abuuray, ayaa haddana difaacay "xooriyadda hadalka" isagoo sheegay in Reer Galbeedku xaq u leeyihiin inay difaacaan xoriyadda wax dhihista!.
Meelo kale: Ma ahan kuwaas aan soo sheegnay oo kaliya ee waxaa jira olole ballaadhan oo ay jaraa'idka Yurub ku doonayaan in ay ku garab istaagaan JyllandsPosten oo iyada lagu khasbay in ay bixiso cudurdaar.
Dalka Switzerland ayay jariidad ka soo baxdaa baahisay labo ka mid ah sawirradaas, halka mid kalana ay ballan qaadday in ay soo daabici doonto Khamiista 02/02/06.
Holland oo iyada dhibaato hore ka soo gaartey filim ay horay islaamka ugu jaraaxaysey ayaa jaraa'id ka soo baxaa daabeceen sawirradan. Mid ka mid ah joornaladan oo lagu magacaabo Volkskrant ayaa bannaanbaxyada iyo dhiidhiga muslimiinta ku tilmaantay "wax qudhun ah"
Dalka Norway ayaa isagu ka hor-maray ololahan oo ay majalladda Magazinet iyo maalinlaha Aftenposten faafiyeen sawirradan.
Waxaa soo kordhaya falalka cadhada ah ee ay muslimiintu –shucuub iyo dowladaba- ku dhaleecaynayaan dowladaha Denmark iyo Norway oo joornaallo ka soo baxaa aflagaaddo iyo ihaano u geysteen Rasuulka sharafta leh (sallallaahu caleyhi wasallam), iyadoo weli dowladahaasi diidanyihiin in ay si rasmi ah uga cudurdaartaan falalkaas fooshaxun ee ay geysteen.
Sucuudiga ayaa u yeertay safiirkoodii Copenhagen kaddib markii muftiga guud ee boqortooyadu hadal adag u jeediyey dowladda Denmark.
Dowladda Liibiya ayaa iyaduna albaabada u laabtay safaaraddii ay ku lahayd Denmark, iyadoo taas kaga jawaabaysa ihaanada lala beegsaday Rasuulka sharafta leh (scw).
Raysulwasaaraha Liibiya, Shukrii Qaanim ayaa sheegay in dalkiisu u arko in sawirrada ay Denmark faafisay yihiin ihaano ba’an iyo kicin mashaacirta msulimiinta oo lagau daandaansanayo Rasuulka (scw).
Urdun ayaa iyaduna u yeertay safiirka Denmark u qaabilsan dalkooda oo saldhiggiisu yahay Sucuudiga, wuxuu Raysulwasaaruhu u sheegay “in Urdun si adag u diidantahay cayda bareerka ah ee joornaalada Denmark la beegsadeen Rasuulka (scw).
Suuriya ayay wasaaraddeeda arrimaha dibeddu ka dalbatay dowladda Denmark in ay ciqaabto kuwa diimaha ku dacadiyey iyo in aanay arrintaasi mar danbe soo laalaaban. Masuul dowladda ka tirsan ayaa laga soo xigtey in uu yidhi: “Fajaciso ayay Suuriya ku noqdeen sawirradan lala beegsaday astaanta sare ee labada ummadeed ee Carabta iyo Muslimka”
Baxrayn ayaa iyadu ilaa hadda canbaarayn uun u jeedisey dowladda Denmark iyadoo aan ilaa hadda wax fal ah ka qaadan, inkastoo ay dalbatay in sida ugu dhakhso badan wax looga qabto.
Iiraan ayaa wasiirkeeda arrimaha dibeddu dhanbaal cabasho ah usoo diray Denmark iyo Norway labadaba. Wasiirka oo sheegay in uu ku hadlayo magaca ummadda reer Iiraan ayaa warqaddiisa kaga codsaday dowladahaas in aanu mar danbe sawirradaas oo kale arkin.
Yaman ayaa iyaduna ka dalbatay Denmark in ay cudurdaar rasmi ah ka bixiso dhibkii ay geysatey. Barlamaanka Yaman ayaa bayaan uu soo saaray, kulan ka bacdi, si adag u canbaareeyey aflagaadadan.
Kuwait ayuu barlamaankeedu ku baaqay in la joojiyo xiriirka dhaqaale ee lala leeyahay dalalka Nabiga (scw) ku tacaddiyey.
Ururka Midowga Islaamka (I.C.O) iyo Jaamacadda Carabta ayaa iyaguna ku hawlan in Qaramada Midobey soo saaraan sharci mamnuucaya wax ka sheegista nabiyada iyo diimaha la raacsanyahay.
Ma ahan dowladaha keliya ee waxaa maalmahan danbe isasoo tarayey cadhada ay dadka muslimiinta ahi ka muujinayeen ihaanada loo geystey Rasuulka (scw). Qaabka ay cadhadooda u muujinayeen ayaa ahaa mid akal duwan.
Bannaanbaxyo farabadan ayaa ka dhacay dalal aad u badan oo muslimiin ah iyadoo ay dadweynahaasi dalbanayeen in dowladahoodu wax ka qabtaan jees-jeeska Rasuulka lagu maagay.
Qaar badan oo ka mid ah shucuubta Muslimiinta ah ayaa joojiyey iibsiga alaabaha laga keeno dalka Denmark, iyadoo ay shirkadaha waawyen ee laga leeyahaya Denmark ee ka ganacsada cuntooyinka, burcadka iyo caanaha qallalan ayay soo foodsaartay khasaaro aad u weyni. Dukaamo iyo shirkado badan ayaa iyagu joojiyey mucaamaladii ay la lahaayeen shirkadahaas reer Denmark, iyagoo gebi ahaanba joojiyey soo bandhigista badeecooyinka laga soo waaridey Denmark.
Shirkadda Arla oo iyadu ah mid si xooggan uga ganacsata dhulalka carabta lagana leeyahay Denmark ayaa qaylo afka ku shubatay iyadoo sheegtay in aanay marnaba u adkaysankarin muqaadacadan soo waajahday, khasaaro ba’ann ilaa haddaba soo gaadhey.
Karzaay, madaxweynaha Afghaanistaan ayaa isagu istaagay mowqif aad uga fog kii laga sugayey qof muslim ah oo diintiisa lagu tacaddiyey. Booqasho uu ku yimid Denmark ayuu sheegay in uu isagu ku qancay fasiraadda ay ka bixisay Dowladda Denmark sawirrada ay faafiyeen jaraa’idkoodu.
Karzaay oo la kulmay raysulwasaaraha Denmark ayaa sheegay in uu ku qancay sharaxaadda uu isaga siiyey raysulwasaaruhu. “Saxaafaddu Denmark waa xor, cidina kama joojinkarto waxa ay rabaan inay faafiyaan, annagana Afghaanistaan hadda waa sidaas oo kale” ayuu ku daray madaxweynuhu.
JOORNAALKII NABIGA (SCW) KU TACADDIYEY OO BIXIYEY WAX CUDURDAARASHO U EG.
Jariidadda JyllandsPosten ayaa daabacday warqad ay ku sheegtay cudurdaarasho ku saabsan xad-gudubkii ay la beegsatay maqaamka Rasuulka Muxammad ah (sallallaahu caleyhi wa sallam).
Warqaddan oo lagu daabacay luqadaha Danish, Engilish iyo Carabi ayay jariidaddu ku sheegtay in si xun loo fahmay sawirradii 12-ka ahaa ee ay faafisay oo aanay iyaga ula jeedin in ay ku caydo Rasuulka ama kaga cadhaysiiso muslimiinta.
Nuqulkeeda carabiga ah, oo ku qornaa carabi aan saxnayn, ayay jariidaddu ku tidhi "waxaa muhiim ah in aanu caddayno in aanaan sawirradaas marnaba ula jeedin in aanu Rasuulka (scw) wax kaga sheegno, ama ku qiima tirno ee waxaanu rabney in ay fure u noqdaan doodda ku saabsan xorriyadda sheegista fikirka" oo ay jariidaddu sheegtay in ay tahay (xorriyadda hadalku) mid ay ku faanayaan. Waxay intaasi sii raacsiisay "markaas ma aanaan ogayn sida arrintani xasaasi ugu tahay malaayiin muslimiin ah oo ku nool Denmar" waa sida ay hadalka u dhigtaye "kuwaas oo ah qayb aan qaybsamin oo nolosha Denmark ka mid ah".
JyllandsPosten waxay dhowr jeer ku celcelisey in sawirradan si gurracan loo fahmey oo aanay iyagu ula jeedin in ay cidna kaga cadhaysiiyaan.
Waxay kale oo sheegtay in sawirrada lagu faafiyey dunida muslimku aanay ahayn kuwii ay jariidaddu baahisey ee ay yihiin kuwo been abuur ah.
Jariidaddu waxay hadalkeedi ku sii dartay in "sawirradaasi sida muuqata ay ka cadhaysiiyeen malaayiin muslimiin ah oo daafaha dunida kala jooga, taasna aad baannu uga xunnahay"
Tifaftiraha qaybta dhaqanka ee Jariidaddan ayaa warbixin uu 29/01/06 siiyey Al-jazeera ku sheegay in ay doonayeen in ay sawirradan ku tijaabiyaan bal xorriyadda wax sheegga ee ay saxaafaddu haysato!
Waxaa mudan in la is-weydiiyo: Nabi muxammad (scw) iyo mashaacirta muslimiintu ma waxay noqdeen bakayle lagu tijaabiyo wixii la rabo?
Tifaftiraha ayaa ka jawaabi waayey markii Al-jazeera u jeedisey su'aal ah "maxaad ugu bilaabi weydeen Holicoust" oo ah xasuuqii ay yuhuuddu sheegteen in Naziyiintu u geysteen dagaalkii labaad ee dunida.
Su'aasha kale ee is-weydiinta mudan ayaa ah: hadalkaasi ma yahay mid daaweynaya ama u dhigma caydii iyo tacaddigii bareerka ahaa ee ay jariidaddu Rasuulka (scw) la tiigsatay?
Ma cudurdaarashaa mise waa fasiraad ka bixin iyo afmaroojin aan waxba ka shisheyn? Iyadoo weliba sheegtay in aanay sawirradaasi khilaafsanayn qaynuunka Denmark.
Malaayiinta muslimiinta ah ee cadhaysani miyay ku qanci doonaan hadalkan aan marnaba laga fahmayn qirasho khaladka ay galeen, ee ay muslimiinta ku eedeeyeen in ay iyagu si khaldan u fahmeen farriintii sawirradu xanbaarsanaayeen? Fahamkaas khaldan oo ay sheegtay jariidaddu in sababtiisu noqon karto is-faham la'aanta xadaaradaha, taasoo keentay in "hindisihii faafinta 12-ka sawir loo fasirtay olole lagaga soo hor-jeedo muslimiinta Denmark iyo dibeddaba.
Su'aasha kale ee muhiimka ah ayaa iyaduna ah: maxay dowladda Denmark ilaa hadda u diidentahay in ay cudurdaar ka bixiso tacaddigan?
Majallad kristaanka lagu faafiyo oo laga leeyahay dalka Norway ayaa iyaduna sawirradaasi baahisay iyadoo weliba la beegsatay maalintii "Ciidul Adxaa" taasi oo loo fasiray daandaansi iyo ka xanaajin muslimiinta intii la doono. Ilaa hadda wax -xataa- fasiraad ah lagama hayo majalladdaas iyo dowladda toona.
Denmark: BANNAAN BAX LAGU GUBAYO QUR'AANKA
Faafin: SomaliTalk.com | Feb 1, 2006
Wargeyska Jylland -Posten oo bambaano loogu hanjabay
Iyadoo ay maalmahan si weyn saxaafada caalamka u hadal heysay cawaaqib xumaddii ka dhaslatay aflagaadadii ay u geysteen Nabi Muxamed NNKH wargeyska xag jira ee Jylland- Posten ee dalkaasi Denmark, ayaa hadana wararka dalkaasi ka imanaya ay sheegayaan in xarunta wargeyskaasi bambaano hanjabaado ah soo saareen sida ay laftooda u sheegeen warfaafinta caalamka. Arrintan ayaa markale waxey cirka ku shareertay xiisadii awalba loo caal waayey.
Muslimiinta dalkaasi ayaa iyagu soo dhaweeyey cudurdaarkii wargeyska waxaana ay ugu baaqeen muslimiinta kale ee caalamka iney cuno qabateyntii badoocooyinka dalkaas saarneyd ka qaadaan, iyadoo ay taasi daba socoto raali gareyn siyaasadeed uusan marna bixin ra'iisal wasaaraha dalkaasi.
Marinka Qaza ee Falastiiniyiinta ayaa weli kooxaha Islaamik Jihaad iyo Mujaahidiinta Al- Aqsaa ay sheegen in hanjabadahooda ay dhigi karnaan marka ra'iisal wasaaraha dalkaasi cudur rasmi ah bixiyo.
Dhinaca kale wargeyska ku hadla afka masiixiyiinta dalkaasi Norway ayaa sheegay in raali gareyn ay baxshaan ay ka dhigan tahay iyagoo meel uga dhacay waxey ku sheegeen xorriyada saxaafadeed ee Norway. Dowlada dalkaasi ayaan iyaduna ilaa iyo hadeer cudur rasmi ah bixin.
Isku soo wada duubo guud ahaan xiisada ay amuurtan dhalisay ayaan aheyn mid sahal ku dameysa haddii ay dowladaha Denmark iyo Norway ay madaxdooda iska indho tiraan cudurdaarka laga doonayo ee la xirriira aflagaada aan geed ku gabashada laheyn ee wargeysyada dalalkaasi kula kaceen Rasuulka sharafta badan ee Muxamed NNKH.